I-LEGO Star Wars Saga, iyathengiswa ixesha elincinci | Ndisuka mac
Ayiloxesha lokuqala oku I-LEGO Star Wars Saga ifumana isaphulelo sexesha elilinganiselweyo, kodwa yenye yeemidlalo ezingenakuphoswa kuqokelelo lwazo zonke izithandwa ze-LEGO yomdlalo we-saga hayi kuleyo yabathandi be-Star Wars.
Njengoko sihlala sisitsho kwezi meko isaphulelo sixesha elincinci kwaye asazi ngokupheleleyo ukuba isithembiso sinokuhlala, ke sukulibazisa ukuthengwa ixesha elide kakhulu ukuba unomdla njengoko inokubuyela kwixabiso laso ngesiqhelo.
Le nguqulo yomdlalo ibandakanya imidlalo emibini yokuqala yesaga kwaye yongeza abalinganiswa abatsha, imifanekiso ephuculweyo kunye namanqanaba ebhonasi ngaphezulu kunokuba ungakhomba nge-lightaber yakho. Inemowudi yabadlali abaninzi eya kusivumela ukuba sisebenzisane nabanye abasebenzisi kwaye xa sisonke esithetha ngako Abalinganiswa abangaphezu kwe-160 abavela kumabhayisikobho e-Star Wars, kubandakanya abalinganiswa abali-10 abangazange babonwa ngaphambili kwimidlalo ye-LEGO Star Wars.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo iimfuno eziyimfuneko ukuze ukwazi ukudlala neMac yethu kwi I-LEGO Star Wars Saga, ke ngaphambi kokumilisela kubalulekile ukuba uzifunde ezi zinto ukuze ungaphoxeki. Masibone:
Iprosesa encinci ye-1,4 GHz
1 GB RAM ubuncinci
Ikhadi lemizobo eli-128MB (ngaphandle kwe-Intel GMA)
I-OS X 10.6.6 okanye kamva ifakwe
Yiba ne-5 GB yendawo yediski yasimahla
Ukongeza kwezi mfuno, bayenza icace kwinkcazo yokuba le LEGO Star Wars Saga ayihambelani ngoku nemithamo efomathiweyo njengeMac OS Plus (icala elinobuzaza). Konke okunye kukonwabela umdlalo kwaye basebenzise eli thuba ngexabiso sigcine malunga nee-euro ezili-10 ngaphezulu kwexabiso eliqhelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Imidlalo » I-LEGO Star Wars Saga, iyathengiswa ixesha elincinci
I-TrendForce ikwindawo ye-Apple No. XNUMX yokuthengisa nge-PC kwi-QXNUMX